ICANDELO 13: UFr. UMichel Rodrigue-Ixesha lembaleki-ukubala ukuya eBukumkanini
ICANDELO 13 LOKUQHUBA "UKUBUYEKEZA NGOKUGQIBELELEYO" NOMNTU. MICHEL RODRIGUE
Amagama avela Fr. UMichel Rodrigue :
Uyakulandela umendo weNdumiso 91 kuba uYesu undifundisile isivakalisi ngasinye sale ndumiso. Ndakhe ndayifunda le ndumiso amaxesha amaninzi ebomini bam, njengoko abanye befundile, kodwa xa athe wayicacisa kum, ndayibona kukukhanya okutsha ngokupheleleyo.
Wena uhlala kwindawo yokuhlala esenyangweni,
Bahlala emthunzini uSomandla,
Yithi kuYehova, Ihlathi lam, inqaba yam,
UThixo wam endikholose ngaye.
Uya kukuhlangula kwisibatha somthi,
Uya kukukhuphela ngeentsiba zakhe,
uzimele phantsi kwamaphiko akhe.
Ukunyaniseka kwakhe kuyikhuselo.
Akuyi koyikiswa zizothuso ebusuku
okanye utolo oluphaphazela emini,
Nendyikitya yokufa ebumnyameni,
nokuba sisibetho esihlasela emini.
Nokuba iwaka liwele ecaleni lakho,
amawaka alishumi ngasekunene kwakho,
Kufuneka ujonge nje;
isohlwayo sabakhohlakeleyo uya kubona.
Kungenxa yokuba uYehova unendawo yakho yokusabela
Ndenze abona baphakamileyo baba ligwiba lakho,
Akuyi kufikelwa bububi.
Akukho lusizi lusondela ententeni yakho.
Kuba izithixo zakhe uziwisele umthetho ngawe,
kukugada naphi na apho uya khona.
Ngezandla zabo ziya kukuxhasa,
hleze ubetheke ngonyawo lwakho kwilitye.
Unokunyathela phezu kwe-apile kunye nenyoka,
nyathela ingonyama nenamba.
Ngenxa yokuba enamathele kum, ndiya kumsindisa;
kuba uyalazi igama lam, ndiya kummisa.
Uya kubiza kum kwaye ndiza kuphendula;
Ndiya kuba naye ekubandezelekeni;
Ngeentsuku ezinde ndiya kumanelisa,
ndimzalisa ngamandla am okusindisa.
INkosi iya kukugubungela izikhonkwane zayo, Uzimela phantsi kwamaphiko akhe. INkosi ilungiselele iifayile ezahlukeneyo naphina emhlabeni ngoku ukuba zikwamkele, njengakwimihla kaNowa. UNowa walungisa umkhombe njengendawo yokusabela yosapho lwakhe. Wayengoyena mntu uphakathi kwabantu ababemhleka. Ukuba wonke umntu obiziweyo nguBawo sele enze indawo yokusabela, oko kungaba yinto entle. Kodwa abaninzi bala ukwenza. Ke sikwiintsuku ezikhokelela kuNogumbe namhlanje asilungiselela zona.
Ngenye imini, uBawo wandibonisa i-Intanethi. Ndifumene into ngamandla. Uthe kum: "Michel, usathana ucinga ukuba unetha, i-Intanethi. Akazi ukuba iyintoni kanye kanye umnatha. Uye wahleka. Unoburharha obuninzi, iNkosi. Unoyolo. Ngamanye amaxesha ndiye ndimve ehleka. Uthe, "Jonga ngoku ubone umnatha woMoya oyiNgcwele," kwaye wandibonisa yonke indawo yokusabela emhlabeni-imephu enesibane esibonisa ukukhanya apho ikhoyo yonke imithombo yamanzi. Kwakumangalisa ukubona.
Indawo yokusabela ikwayindawo ekufuneka inikezelwe kuBawo. Abanye abantu bafumene umyalezo othile wokwakha indawo enkulu yokusabela. Indawo yokusabela inokuba likhaya, nokuba liphi na, ukuba lingcwalisiwe kuYise ngentliziyo efuna ukuthobela kwaye lithembeke kuye ngokuvuma igama likaYesu, iNkosi yethu noMsindisi wehlabathi, kungabi lizwi kuphela , kodwa nangezenzo.
Indawo yokusabela, okokuqala, nguwe. Ngaphambi kokuba yindawo, ingumntu, umntu ophila noMoya oyiNgcwele, ukwimo yobabalo. Indawo yokusabela iqala kumntu owenze umphefumlo wakhe, umzimba wakhe, ubuntu bakhe, isimilo sakhe, ngokweLizwi leNkosi, iimfundiso zeCawe, kunye nomthetho weMiyalelo Elishumi. Ndibiza iMiyalelo Elishumi incwadi yokundwendwela ezulwini. Xa ufika kumda, kuya kufuneka ubonise ipasipoti yakho. Ndiyakuqinisekisa, ngaphambi kokungena ezulwini, kuya kufuneka ubonise ukuba uthobele kangakanani kwiMiyalelo Elishumi yeNkosi kuba iTestamente Endala ayitshabalalwanga nguYesu. ITestamente Endala izalisekisiwe nguYesu, kwaye oku kuthetha ukuba neTestamente Endala kufuneka zizalisekiswe nangathi. Asizizo iinkosi. Singabafundi kuphela.
Indawo yakho yokuqala ikwayiNhliziyo eNgcwele kaYesu kunye nentliziyo kaMariya. Kutheni na uMariya? NguMariya kuphela owanikela inyama kuYesu. Oku kuthetha ukuba Intliziyo kaYesu yinyama kaMariya, kwaye awunakukwazi ukwahlula intliziyo kaYesu kwintliziyo kaMariya.
Zonke i-refuges ziya kudityaniswa kunye. Abantu kwindawo nganye yokusabela baya kukhethwa njengabathunywa. Iya kuvakaliswa kwindawo nganye yokusabela ngesipho. Bazakuthathwa nguMoya oyiNgcwele ukuba bahambe bayokuncedisa, badibanise kunye nezinye iirisi ukuze abantu bazi ukuba kwenzeka ntoni kuyo yonke indawo. Ukuba uswele, abathunywa bayakwazi ukuba benze ntoni. Baza kuba njengoFilipu kwiZenzo zaBapostile. Uyakhumbula ebhayibhileni xa uFilipu, umpostile, waya kwithenwa wambhaptiza, kwaye kwangoko emva koko, ngaba uMoya oyiNgcwele wamthatha uFilipu wambeka kwenye indawo? Kuya kuba ngokuchanekileyo. Ke asizukudinga fowuni, akukho nto injalo. Unxibelelwano luya kuba kwindlela yoMoya oyiNgcwele.
U-Thixo undibonisile ukuba xa lifikile eloxesha, abantu abakwi-refuges abayi kuphosa nto. Abayi kuphoswa yi-Ekaristi. Bayoba ne-Ekrisarist eNgcwele endaweni yabo kuba Uya kuba balungiselele ababingeleli ukuba bahambe baye kwiindawo ngeendawo, kanye njengoko washukumisayo uFilipu, ukulungiselela ukubonelela i-Ekaristi eNgcwele kubantu Bakhe. Umbingeleli uya kufumaneka kuyo yonke indawo yokusabela, xa athe umbingeleli akakho, isithunywa eso sizisa kuMthendeleko oyiNgcwele ebantwini. Khumbula, wakwenza oko xa wayevela ePortugal. Uninzi lwabantu luyazi ngeapparitions zikaMary eFatima, kodwa balibale ngelosi yasePortugal. Uye weza ne-Ekrisarist eNgcwele. Undibuza ukuba wayenza njani? Sinomdla kakhulu. UThixo uYise wacela ingelosi ukuba izise uMthendeleko. Ingelosi iya kuqala kwintente yokuhlangana, ithathe umamkeli, aze emva koko afike. Le yindlela abanye ababoni abafumana umamkeli ngeilwimi zabo kwiingelosi ezingcwele. Icawe iyazi ngale nto.
Ingelosi ayinawo amandla wokunikezela iSonka soBomi. Oku kungokaKristu neCawe, kwabo bamiselwe ububingeleli. Xa ingelosi ikwenzile oko ePortugal, yayifuna ukufundisa abantwana balapho ukuba bathandaze njani na ngokudumisa.
Emva kweeveki ezintandathu ezinesiqingatha [okanye njalo] kulandela Isilumkiso, xa amandla kaSathana ebuyayo, uya kubona [ngelinye ixesha] ilangatye elincinci phambi kwakho, ukuba ubizelwe ukuba usabele. Le iya kuba yingelosi yakho yokugada ekubonisa ilangatye. Kwaye ingelosi yakho egada iya kukucebisa kwaye ikukhokele. Phambi kwamehlo akho, uya kubona ilangatye eliya kukukhokela apho uya khona. Landela eli dangatye lothando. Uya kunikhokelela kwindawo yokusabela kuBawo.
Ukuba ikhaya lakho ligwiba, uya kukukhokela ngeli dangatye ekhayeni lakho. Ukuba ufuna ukufudukela kwenye indawo, uyakukukhokela kwindlela esa apho. Nokuba indawo yakho yokubalekela iyakuba yeyesigxina, okanye eyethutyana ngaphambi kokufudukela kwenye enkulu, iya kuba nguTata owenza isigqibo. UBawo wandixelela ukuba indawo yokusabela esisigxina iya kuba nequla. Oku kubalulekile. Lowo iya kuba ngumqondiso wokuba yindawo yokuhlala engapheliyo.
Awuyi kuzisa iselfowuni. Uya kuyishiya imoto kude nawe kunye nepropathi yakho. Awuyi kusebenzisa i-Intanethi kwaye uza kuyilahla ikhompyuter yakho, umabonakude wakho, naluphi na uhlobo lwesixhobo se-elektroniki kuba usathana sele esebenza kwezi mveliso ngaphambi kokuba uzifumane. Ukusebenzisile ngaphakathi kubo indlela yokukufumana naphina apho ukhoyo. Abantu banokuva xa uthetha ekhayeni lakho ngefowuni yakho. Bayakubona kwikhamera encinci. “Hayi, tata,” abantu bathi kum, “iilensi zekhamera azisebenzi. Livaliwe. ”
“Huh! Huh! Ngaba awazi ukuba banokuvula? Sizinike imvume ngokusayina kwimigca phantsi koonobumba abancinci esingafundanga. Umtyholi uya kusebenzisa i-I-phone yakho, i-Pad yakho, ithebhulethi yakho. . . Kuya kufuneka siziphose ezi zinto ukuze sizikhusele. lahla yonke into emhlabeni wakho. Awuzukuzifuna ezi zinto kwakhona. Kuya kufuneka uthembeke koku. Zikhuphe. Sukuba nexhala malunga nonxibelelwano. INkosi indibonisile ukuba siya kunxibelelana njani na, ngelizwi leNkosi, Usathana uzakusebenzisa esikubiza ngokuba zii-elektroniki chips, ezibekwe kuyo yonke imoto entsha. Uyakubona apho uya khona kwaye akulandele endleleni. "Owu, GPS, kumnandi ukuba nayo!" uthi. Ewe, kulungile kuye, naye!
Emva kwexesha [malunga neeveki ezintandathu ezinesiqingatha] bavunyelwe nguThixo ukuba abantu babuyele kuYesu, kuya kufuneka benze isigqibo: babuye kuYe inkululeko yabo yokuzikhethela, okanye baMale. Ukuba abanye bayamgatya, uya komelezwa nguMoya oyiNgcwele. Xa ingelosi ikubonisa idangatye lokulandela kwindawo ekuphephela apho ikufuna khona, uyakuqiniswa nguMoya oyiNgcwele, kwaye iimvakalelo zakho ziya kuthathwa buthathaka. Ngoba? Ngenxa yokuba uya kuhlanjululwa kuwo wonke umnyango wobumnyama. Uya kuba namandla oMoya oyiNgcwele. Intliziyo yakho iya kuba ngokwentando kaBawo. Niya kuyazi intando kaBawo, kwaye niyazi ukuba bakhethe indlela engalunganga. Uyakulandela indlela yeyakho phantsi kwesikhokelo seNkosi kunye nesithunywa seNkosi kuba uyindlela, ubomi nenyaniso. Intliziyo yakho iya kuba nguMoya oyiNgcwele, oyena mntu uluthando lukaKristu, nguYise, uYise. Uya kukuqhuba. Uya kukuqhuba. Awuyi koyika. Uya kubabukela nje. Ndiyibonile. Ndadlula kuyo. Awuyi kuba nakho ukwenza enye into kubo. Uya kuba ulufezile uthumo lwakho ngemithandazo yakho kunye nobungqina bakho ngenxa yeNkosi, kwaye kuyakufuneka baphile ngokwesigqibo sabo.
Uza ku "Hlala kwindawo yokuhlala esenyangweni" kwaye "uhlale esithunzini sikaSomandla."
Kwiiveki ezintandathu ezinesiqingatha emva koMgaqo weSazela, isipho esikhulu siya kunikwa sonke. INkosi iya kuzolisa iinkanuko zethu kwaye ixhase iminqweno yethu. Uyakusiphilisa kubugqwetha bethu, ukuze emva kwale Pentekosti, sive ukuba umzimba wethu wonke uvumelana naYe.
Umlindi omi kuzo zonke iindawo zokusabela uya kuba yingelosi engcwele yeNkosi eya kuthintela nabani na ukuba angangeni nangophawu lwasemnqamlezweni. Abaninzi sele benophawu lomnqamlezo, endilubonayo, kwaye abaninzi baya kuwunqwenela. Kwaye bonke abo bafumene umnqweno kuye, ingcinga yokuba bafuna usindiso lwaKhe, baya kuphawulwa ebunzini labo ngomnqamlezo okhanyayo yingelosi yakho yokugada. Ukuba unqwenela lo mqondiso, [ongabonakaliyo ngamehlo omntu, kodwa hayi kuThixo], yithi kuYesu ngentliziyo yakho kwaye uya kuphawulwa.
UBawo undixelele ukuba xa abantu besiya kwindawo yokusabela, abaninzi bayaphiliswa kwizigulo ezikhulu ukuze bangabi luxanduva kwabanye. Usaya kuva iintlungu eziqhelekileyo ngenxa yokuba ungumntu kwaye awekho ezulwini okwangoku, usabela nje. Wonke umntu uya kuba lapho ngokuzithandela, esazi ukuba intsikelelo yeNkosi iphezu kwabo.
Kwiminyaka emithathu enesiqingatha, uya kuba yindawo yakho yokusabela okanye esekhaya lakho linikezelwe njengendawo yokusabela, kodwa ungabi lusizi ukuba ungaphumi. Uya kukuvuyela ukubakhona ngenxa yoko uya kubona kuza kwenzeka ngaphandle. Uya kuba uzixakekise ngokuthanda kukaYise. Uya kukunika into enkulu ukuze uhlale uxakekile. Uya kumangaliswa koko kuya kwenzeka ekhayeni lakho nakwilizwe lakho. Intliziyo yakho ayizukhathazeka lusizi kunye ne-ennui. Akuyi kuba nesithukuthezi.
Awuyi kuvunyelwa ukuba uphumle ezingubeni zakho, ulinde abanye ukuba bakukhonze. Ngokwabelana, ngokuhlala kufutshane, kunye nokusebenza kunye, uthando lwakho luya kuhlala luvavanywa. Ngaba unokulinganisa amanenekazi amahlanu kwisitovu esinye uzama ukupheka i-ham? "Senza ngolu hlobo, ngale ndlela yokupheka". . . “Hayi, hayi, hayi, injalo. . . "
Khawube nomfanekiso ngqondweni wamadoda. "Kufuneka silwenze olu donga lube lukhulu, ukuba sifuna ukubeka abantu abaninzi apha". . . ”Hayi, hayi apha. Ngaphaya. . . " Akuyi kuba lula. Kuya kufuneka sizifundise ukuze sikwazi ukukhathalela abanye ngendlela asikhathalele ngayo uYesu. Kuya kufuneka sifunde okuninzi. Kodwa siya kuyenza ngobubele bakhe. Siza kubuqonda ubomi bommandla wobuKristu bokuqala kwiZenzo zaBapostile, apho isithi bonke babenentliziyo enye kunye nomthandazo omnye kwaye babelana ngento yonke:
Uluntu lwamakholwa lwalunentliziyo nye nengqondo, kwaye kungekho namnye owabanga into yokuba nayiphi na impahla yakhe yeyakhe, kodwa babenayo yonke into efanayo. (Izenzo 4: 32)
Bazinikezela kwimfundiso yabapostile kunye nakubomi bomntu wonke, ekuqhekezeni isonka nasemithandazweni. Weza wonke umntu, kwaye imimangaliso nemiqondiso emininzi yenziwa ngabapostile. Bonke ke ababekholwa babendawonye, ​​benobudlelane ngeento zonke. (Izenzo 2: 43-44)
Ukuba abantu beza ekhayeni lakho okanye kwindawo yokusabela, baya kuthunyelwa yingelosi yabo. Uya kukhuselwa kwaye ubonelelwe, udinga kuphela iimfuno ezisisiseko. UYesu uza kuphinda-phinda oko onako. Ungaxhalabi. Kodwa sukucinga ukuba uya kuba ne-lipstick okanye i-French yesiqholo. Awuhambi ngololiwe. Ulapho ukuze ulandele ukuthanda kukaBawo.
Ndizibonile iirisi ezininzi, abantu abaninzi balungiswa naphi na apho ndiya khona. Ndidibene nabantu abanokuhlonela kunye nokuthanda okuhle, kwaye bafuna ukwenza njengabafundi bakaYesu bokwenyani, ngokwenza ngeLizwi leNkosi noMoya ezintliziyweni zabo.
Ndityelele indawo yokusabela, kwaye babenokutya okuninzi apho. Ndibuze, "Kutheni utya kangaka?"
"Ngenxa yale minyaka mithathu inesiqingatha sizokuba siphephelweni."
Ndathi, “Ungakhathazeki. Ukuba uYesu uphindaphinde izonka ezihlanu neentlanzi ezimbini ukondla abayi-5000, angakongeza ukutya kwakho kangangeminyaka embalwa. Akanangxaki ngaloo nto. ”
Oku kuya kukunika umbono wento ezayo ukuze ulungele, okokuqala unentloko elungileyo emagxeni ethu. Khetha kuphela izinto eziyimfuneko ebomini. Zama ngoku ukudibanisa umgubo kunye nokuzenzela isonka. Lixesha lokuba yenziwe. Lakufika ixesha, uthi, "Ndiyazi, Nkosi Yesu, ukuba wenza isonka." Ezi zinto zibalulekile. Abantu abazi ukuba mabenze ntoni ngoku kuba baqhele ukutya ukutya kwangaphambili. Ngaba unezinto eziyimfuneko ukuze uhlale uhleli: Umlilo, irayisi, amanzi, ubisi olomileyo, umzekelo. Xa sigcina izinto kakuhle, zinokugcina ixesha elide. Xa sasisencinci, uMama wayefaka inyama kunye nemifuno ebhomeni, abilise amanzi, kwaye atywinele ngokuqinileyo ngaphandle komoya. Sayitya emva kweminyaka emihlanu, kwaye asizange sigule. Kutheni le nto bebeka imihla yokuphelelwa ngamathini kwiinyanga ezimbalwa okanye kunyaka omnye? Kutheni le nto bebeka oku? Ukwenza imali.
Zilungiselele. Sebenza ngezandla zakho. Cinga ngokutya kwakho okusisiseko. Yile nto ke ekufuneka siyenzile. Akusayi kubakho mbane. Uyazi, andililo ingcali ngokubhekisele emfazweni, kodwa enye yezinto zokuqala ukuvuthuzwa zizityalo ezivelisa umbane. Lena Yinyaniso. Ukuba asinawo umbane, akukho khompyutha iya kusebenza, akukho nkqubo yebhanki.
Ukuba ukhokelelwa ukuba uye kwindawo yokusabela, shiya isonka sakho etafileni kwaye usabele. Landela idangatye eliphambi kwakho. Kwindawo yokusabela, uThixo uyazi ukuba makenze ntoni, kwaye abantu abanendawo yokusabela nabo bayayazi into amakayenze. Ke funa ugcino. UThixo uya kukwandisa ukutya kwakho xa usiya khona.
Ukusuka kwindawo yokubalekela, uya kubona iinyoni, eziphantsi kolawulo lukaSathana, zigqitha kwindawo yakho yokusabela okanye ekhayeni. Ngamanye amaxesha baya kujongeka njengomkhosi; ngamanye amaxesha, njengomntu obhalise kulo Rhulumente weLizwe elinye. Uya kubabona bedlula esitratweni, kodwa abayi kulibona ikhaya lakho okanye indawo yokusabela. Yindlela yokukhuselwa kweNkosi kule ntaka. Abayi kukwazi ukukuva, bakubone, okanye bangene ekhayeni lakho okanye kwindawo yakho yokusabela.
"Isibetho esitshabalalisayo" iya kuba lulo lonke uhlobo lwesibetho esiya kuhamba kwihlabathi lonke. Ubhubhani onobungozi yi-AIDS ne-Ebola. Ukususela kwimfazwe yehlabathi yesibini, oososayensi baqala ukuvelisa izixhobo zemichiza, kwaye oku kuyenzeka ngoku. Kuya kubakho izibetho ezintsha, kodwa uya kukhuseleka.
USathana uyakuzama ukonakalisa imizimba yethu. Oku kubalulekile kule nto ndikuxelela yona. Izifo ezininzi ngoku zivela kuMtyholi, ophefumlele inzululwazi entsha. Uyokubetha umzimba ngokutya kunye namayeza enziwe elebhu. Izazinzulu ngoku zidlala nge-genomes, izinto zemvelo zobomi, kwaye isidlo esitsha "sesayensi" sele sikufuphi: inyama eyenziwe. Ngo-2020, iya kuba kwiimarike, ndiyakuqinisekisa. Ulutsha namhlanje lufa ngoku kwiziselo zamandla, njengeRed Bulls.
Abasemagunyeni bayakwazi oku, kodwa iziselo ezininzi ezivunyelweyo kwintengiso ngenxa yemali-yenye yeentloko zerhamncwa.
Iinyosi ziyafa. Ndivile namhlanje kungenxa ye-wifi, i-4- kunye ne-5-G tower ezithumela ii-frequency electromagnetic. Isiqingatha semveliso yeenyosi kulo nyaka sweleke. Usebenzisa izinto ezininzi ngoku ukusenzakalisa.
USathana uza kusebenzisa ngokubanzi, inaliti eziqhelekileyo kunye nezitofu zokuhambisa abantu ngesifo: ukudubula komkhuhlane, umzekelo. Ukudubula komkhuhlane omtsha kuqukethe iiproteni zeseli kunye iDNA yesibeleko kwiintsana ezihlanjelweyo, eya kuthi ibangele ukugula okufana nesifo se-mad cow, kuba asenzelwanga ukuba sidle uhlobo lwethu. Ugqirha eQuebec wandixelela ukuba akathembi konke konke malunga nokubulawa ngumkhuhlane ngoba kule minyaka ilishumi idlulileyo, benqabile ukutyhilela wonke umntu, nkqu noogqirha, ngento ekuyo.
Ngaphambi kokuba ndinikele intetho kutshanje e-United States, uSathana weza kum ebusuku ukuze andibethe, ukuba andoyike, kuba wayesazi ukuba ndiza kube ndithetha. Ngelesithathu ngokuhlwa lixesha lemini yure yenceba xa uYesu wasindisa umhlaba. Ixesha lesithathu lixesha likaSathana ebumnyameni, ngoko ke wafika ngeloxesha, kwaye kwiyure enesiqingatha, salwa. Kodwa bendinoxolo. Ndithe, "Akukho nto unokuyenza."
Asifanelanga soyike kuba ukholo lwethu sele luloyise kuSathana. Okukhona uyaqonda ukuba, kokukhona uya komelela. Ukusuka kwindawo yokusabela, uya kubona ngamehlo akho okwenzekayo ngaphandle. Uzakubona utolo lubhabha emini, ndiyakuqinisekisa. UThixo undibonisile izinto ezimbi ezenziwa ngabantu endibabiza ngoku "zizinja zikaSathana," ezizokuluma zidle abantu kunye namakhaya. Kodwa iNkosi iya kukuzinza, kwaye uya kuqonda amaxesha kaThixo, kunye nendlela ongenakwenza nto ukuyitshintsha kuba bekhethile.
Ezinye “zesibetho esihamba ebumnyameni,” kunye “nesibetho esiqhushumba emini enkulu” ziya kubangelwa sisono, esiphethe ngetyhefu kaSathana. Izenzo zobungqingili, ukuziphatha okubi ngokwesini, ukukrexeza, iziyobisi-ngoku umthetho osemthethweni, yazisa izibetho. Inkcubeko yokufa iya isiba mandundu ngakumbi. Izilwanyana azenzi okwenziwa ngabantu ngoku.
Kwiminyaka engamashumi amabini anesihlanu eyadlulayo, xa ndandingumcebisi, ndeva yonke into eofisini yam. Ukuqala kwam ukuba ngumfundisi, amabali aba mandundu. Ngamanye amaxesha kuye kufuneke ndishiye iofisi yam ndigabhe ngenxa yento ebendiyiva. Ukugqwethwa kwabantu kuphambene, kwaye xa bendisithi ebantwini, “Isilwanyana asizukuyenza le nto uyenzayo,” babendijonga, beqonda ukuba oku kuyinyani. Abantu babonakala ngathi baphambene. Oku kungenxa yokungena kukaSathana ngokugqwetha nakwiziyobisi. Omnye umnyango kukufa. Usathana ufuna ukuba bafe.
USathana usebenzise isayensi ukufezekisa injongo yakhe yokubamba imizimba eyilwe ngokuchasene nentando yeNkosi. Ngoku babumba imizimba kwilabhoratri. Le mizimba zizinto zikaSathana zokuba yityhefu, ukungcolisa ubomi, kunye nokusasaza ubambe bayo eluntwini. Sele bezenzele izilwanyana. Ndivile ukuba babeka uhlobo lwesigcawu enkomeni. Isigcawu yenye yeempawu zikaSathana kwizikrelemnqa zikaSathana. Sifana namaxesha omkhukula. Ukubawa, umona, intiyo, kunye needemon zixhaphaza ezobugcisa, zilimaza izazela zabantu, kwaye zidodobalisa nengqondo yabantu.
Ngoku i-transgender ngumceli mngeni omkhulu. Umtyholi akanawo amandla okudala: nguThixo uYise odalayo. Kodwa ufuna ukuxelisa oko kwenziwa nguThixo, ke ngoko utshabalalisa umfanekiso wendoda kunye nowamfazi. Uyababhidisa ukuqonda kwabo, axhase inkanuko zabo, ukuze bacinge ukuba ayisendoda okanye umfazi, ukuba bayadlula, kwaye ubenza ukuba bathathe izigqibo zabo ezimbi. Umtyholi akanasondo. Yingelosi. Uyayiqonda ngoku ukuba oku kuthetha ntoni? Kuthetha ukuba ufuna kubo ngokomfanekiso wakhe. Yile nto yenzekayo ngoku emhlabeni.
Imizimba yethu inokuba ngumda kaSathana. Uhlala engena kwiimvakalelo zethu: amehlo ethu, ivumba, uchukumiso, ulwabelana ngesondo. Ungena ngokuthanda kwethu, ukucinga kwethu, ubukrelekrele bethu. Kodwa xa umntu esithi, "Ndifuna ukubuyela kuwe, Bawo, Bawo. Ndiyakwamkela, Yesu, njengoMhlawuleli wam, kwaye ndifuna umoya wakho kum, ”Uyokuphilisa akhulule intando yakho kumakhonkco kaSathana, kwikhonkco awayelimisele kunye nawe.
Yazi ukuba iingelosi zeNkosi zihlala zikho ukuphendula umnxeba wethu. Silibele ukubabiza ngoku. I-New Age inazo zonke iingelosi, kodwa ukholo lwethu lobuKristu luhlala lunezingelosi. Kufika njani uNyaka oMtsha kunye neengelosi ezilahlekisayo iingelosi, kwaye thina sineengelosi ezilungileyo singaziceli? Kungenxa yokuba zimela umkhosi kaSathana. Yiyo loo nto. Iyagcwala emhlabeni. Basebenzisa uMariya. Sebenzisa uYesu. Bamhlazisa uMariya. Bamhlazisa uYesu. Bacekisa bonke abangcwele bethu. Bafikelela emva kwisiko lethu. Bazama ukuphembelela abantu bamaKatolika ukuba batshintshe iingqondo zabo kwaye babe ngamakholwa eNew Age. Ngoku kufuneka sithembeke koku. Zininzi iingelosi ezisirhangqileyo. Sinomkhosi weNkosi, kwaye ngalo lonke ixesha uthetha nomlindi wakho wokugadayo, uyamamela. Unokuqiniseka ngaloo nto. Uyayazi intliziyo yakho. Uyakwazi. Ukhona ukunceda. Zonke iingelosi zikaThixo zikhona ukukunceda.
Ngenxa yokuba unayo uYehova indawo yakho yokusabela
ndenze oyena Uphakamileyo waba ligwiba lakho. . .
Ukuba uziva ubizelwe, ungcwalisa ikhaya lakho nomhlaba wakho uhlala kuwo ukuze uwukhusele, ukuba uBawo unqwenela njalo. Ngokufumana kukaMoya oyiNgcwele entliziyweni yakho, ungathatha inxaxheba kuye ukuba wenze ukuthanda kukaBawo wethu, kwaye emva koko wenze umthandazo wokuzinikezela ngokusuka entliziyweni. Ayidingi kuba semthethweni. [Cofa apha ukuze ufumane eminye imiyalelo yokucoca ikhaya lakho nomhlaba njengendawo yokusabela.]
“Egameni loYise, lo Nyana, noMoya oyiNgcwele, Thixo uYise, ngo Nyana wakho oyintanda, Ophalaze igazi lakhe emnqamlezweni ukuze asisindise, ndinikezela ikhaya lam nomhlaba wam kuWe. Yeyakho. Nceda uyisebenzise njengoko unqwenela ukuphepha abantu bakho. Ndinikezela lo mhlaba kunye nekhaya lam ngokunyaniseka kwakho ngentliziyo ye-Illimateate kaMariya ukuba ube phantsi koMoya oyiNgcwele ngexesha lokucocwa. "
Emva koko uya kuba namanzi angcwele kunye netyuwa esikelelekileyo esele ikhutshiwe. Thatha amanzi agxothiweyo kwaye uwafefe ngaphakathi, usenza umqondiso womnqamlezo, “Egameni loYise, lo Nyana, noMoya oyiNgcwele. Ngaphandle komhlaba wakho, thabatha ityuwa ekhutshiwe kwaye ufefe phambi kwakho, emva kwakho, nangapha kwicala lakho, wenza umqondiso womnqamlezo, kwaye ityiwa iya kuxutywa nomhlaba wakho.
Kutheni ndinyanzeliswa ngale nto? Rhoqo ebomini bam, ndiye ndilwe nomtyholi. Ngobabalo lweNkosi, ndiyakhupha, kwaye ngobabalo lweNkosi, ndibone into enokukhupha ityiwa kunye namanzi angenza, ngokwenza ii-exorcism. Bamkhuphela ngaphandle usathana. Umtyholi akanako ukwenza bugqwetha kumhlaba ohlulekileyo, ndiyakuqinisekisa.
Nje ukuba umhlaba ungcwalise umhlaba kunye nekhaya lakho, indawo yakho yokusabela ngoku ikhuselwe yingelosi engcwele yeNkosi. Ayisiyindawo eningcwalise ngayo kuphela, kodwa kunye nabo bonke abahlali bayo. Oku kuthetha ukuba ukuba umntu uza ekhayeni lakho kunye nomoya wedemon, idemon iya kuhlala ngaphandle. Umntu unokudlula, kodwa umoya uya kumlinda de afike umntu. Umoya omubi awuyi kungena. [Cofa apha ngolwazi oluthe kratya ngendlela onokusikelela ngayo ikhaya lakho kunye / okanye umhlaba njengendawo yokusabela.
Ukuqhubela phambili kwiposti elandelayo ye "virtual retreat" kunye noFr. Michel, cofa apha ICANDELO 14: UFr. UMichel Rodrigue-Umyalezo malunga neeNgelosi Zethu eziGcinayo ziya kusinceda.
exhonyiweyo iingelosi, Iidemon kunye nomtyholi, Fr. UMichel Rodrigue, Ku philisa, imiyalezo, Ukukhuselwa ngokwasemzimbeni kunye nokuLungiselela, Isibhalo, Ixesha le-Anti-Christ, Ukubuya kokuphenjelelwa nguSathana, Ixesha leembaleki, Izitofu, Izibetho kunye neCovid-19.
← ICANDELO 14: UFr. UMichel Rodrigue…
ICANDELO 12: UFr. UMichel Rodrigue… →